Tanushra Dutta Oo Saldhiga Police-ga Mumbai Looga Yeeray Dacwadii Nana Aawged (+Sawiro) – Filimside.net
Tanushra Dutta Oo Saldhiga Police-ga Mumbai Looga Yeeray Dacwadii Nana Aawged (+Sawiro)
Atirishada Tanushra Dutta ayaa dacwad ka gudbisay jilaaga caanka ah Nana Patekar, Qarash gareyaha filmka Horn Ok Please Samee Siddiqui, Director-ka filmkaas Rakesh Sarang iyo waliba Ganesh Acharya oo ahaa macalinka Dance-ga mashruucan.
Waxay ku eedesay xili la duubayey hees kamid ah mashruucan 10 sano kahor in Nana Patekar iyo nimanka kale u tashteen si Nana kaga faaidesto duubista heeskas uguna dhowaado atirishadan hab anshax xumo ah.
Balse markee ku dareentay ayee isaga baxday iyadoo ay nimankan kale garab kusiyeen falkaas balse intaas loogama harine gaarigeda ayaa laga bur buriyay markii ay goobhta ka tagi rabtay.
Hadaba Police-ka magaalka Mumbai ayaa la sheegay inee Tanushra gurgeda ku booqan doonan balse iyada ayeeba Saldhiga Police-ga ugu yeereen si ay dacwadeeda iyo side wax udhaceen kaga qoraan kiiskan min bilaaw ilaa dhamaad.
Waxaa laga soo qabtay sawiro atirishadan markii ugu horeysay kadib siduu kiiskan u bilaawday shalay ayee booqtay saldhiga Police-ka balse wey kusoo raagtay ama kusoo daahday maadam laga qoraayey 10 sano kahor dhacdada side wax udhaceen min bilaaw ilaa dhamaad.
Xalay ayaa la arkay iyadoo kasoo noqotay Police-ka dhankooda xaafadeedana usocoto waxaa la filaa in maxkamad lasoo saari doono nimankaan goor dhow halkaan hoose ka daawo sawirada Tanushra laga soo qabtay..